कुन्दिनी | मझेरी डट कम
Laxman Ghamal — Sun, 12/04/2016 - 23:53
पिता जयश्वर र माता फुलमतिको सहवासबाट पाँचौ सन्तानको रुपमा जन्म लिएकी कुन्दिनीमाथि चार दिदी र मुनि एउटा भाइ छ । कुन्दिनी तीन वर्षकी लाग्दा उसकी आमाको कोखबाट उसको भाइको जन्म भएको थियो । चार दिदीले भोग्नु परेको दुख उसले भोगिन कारण भाइ जन्मिएको श्रेय उसको भाग्यलाई गएको छ । आमा फुलमति पनि छोरो जन्मिएपछि सुख पाएकी छिन् । चार दिदीको विवाह भैसकेको छ । जेठी र माइलीलाई चोरेर लगेका रे, साइली र काइलीलाई पिता जयश्वरले नै पराईको हातमा थमाइदिए । भाइ जन्मिएपछिको दश वर्ष भाइसँगै रमाउँदै बिताएकी कुन्दिनीलाई वरिपरिका छिमेकीले भन्छन् - निकै भाग्यमानी रैछे यो कुन्दिनी । भाइले पाउने माया यसले पनि पाएकी छे ।
भर्खर तेह्र वर्षमा लागेकी कुन्दिनीलाई पहिलो रजस्वला हुन्छ । उसले देखेकी छे - रजस्वला भएपछि उसका दिदीहरू गोठमा गएर पहिलो पटक बाइस दिन, दोश्रो पटक एघार दिन र तेस्रो पटकमा सात दिन बिताएको । छोरालाई ज्वोरो आएकाले पिता जयश्वर छोरालाई झारफुक गर्न लामाकोमा गएका छन् । घरमा आमा र कुन्दिनी मात्रै छन् । कुन्दिनीले वास्तविकता आमालाई बताउँछे । आमाले हतार हतार कुन्दिनीलाई अरु छोरीहरूले रजस्वलामा बिताएको त्यही गोठमा लैजान्छिन् । जङ्गलको छेउ, राम्रो ओतसम्म नभएको गोठमा पशु-चौपायासम्म छैनन् अहिले । आमा फुलमति सम्झाउँछिन् यस्तो बेलामा दाजुभाइ, काका, भतिजहरूलाई देख्न हुँदैन । बिहानको सूर्य पनि नहेर्नु भन्दै गोठमा भएका त्यही थोत्रा लुगाफाटोहरू दिन्छिन् जुन उसका दिदीहरूले पनि प्रयोग गरे । रुमालमा पोको पारेको जौँको सातु अलक्क कुन्दिनीको हातमा दिँदै भोलि आउने आश्वासनसँगै आमा फुलमति जान्छिन् ।
उसलाई थाहा थिएन गोठमा गएपछि यतिका सास्ती भोग्नुपर्छ भन्ने । कहिल्यै एक्लै नभएकी ऊ अब एक्ली भएकी छे । बनमा बाघ भालुको आवाज सुनेर डराइरहेकी उसलाई गोठका गाह्रामा मुसाहरू ओहोरदोहोर गर्दा पनि आत्माहरूले तर्साएजस्तो भएको छ । आँखाबाट आसुका ढिकाहरू खसाल्दै, आँखालाई रातभरि जिउँदै राखेर कटाई पहिलो रात । घरको काम सकेर मध्यान्हमा आमा आउँछिन् भोलिपल्ट । खाने कुरा ल्याएको पोको अलक्क दिन्छिन् । कुन्दिनी भन्छे म यहाँ बस्न सक्दिन आमा । आमा भन्छिन् के गर्छेस छोरी पुर्खौदेखि चलिआएको चलन गाउँका मुखियाका छोरीहरू लेसम्म भोगेको चलन मैले पनि भोगे अनि तेरा दिदीहरूले पनि भोगेकै हुन् । कुन्दिनी मौन बस्छे, बिचरा ऊ प्रतिवाद गर्न सक्ने नै काँहा भएकी छे र ?
सधैं झै आमा आउँछिन् खाने कुरा छोड्छिन अनि जान्छिन । कति रात ऊ निदाएकी छैन अब त बानी परिसक्यो उसलाई । बाइसौ दिन भएको छ उसले गोठमा बिताएको, अब घर जानलाई आतुर भएकी छे । आमा लिन आउँछिन अनि जान्छे घर । सुनपानीले चोख्याएर उसलाई घर भित्र्याइन्छ । मनमा अनेक कुरा सोच्दै छे, आफूले आफैसँग प्रश्न गर्दै छे आखिर किन हामी नारीहरूले यस्तो नियति भोग्नु परेको होला ? एक दिन, दुई दिन गन्दै छे ऊ फेरि जानु पर्ने । ऊ फेरि जान्छे अनि उस्तै परिस्थितिसँग सामना गर्दै फेरि घर फर्किन्छे । आज ऊ निक्कै खुसी छे अब कहिल्यै गोठ जानु नपर्ने भएर किनकि उसले तेस्रो पटकको सात दिन पनि बिताएर आएकी छे । फेरि सुनपानीले चोख्याइन्छ अनि भित्र्याइन्छ उसलाई घर भित्र सधैंझै ।
पश्चिम्मा सूर्य डुब्न लागेको छ अनि सूर्यका रश्मिहरू आगनमा ठोकिएका छन् । भाइसँग त्यही किरणमा खेल्दै छे कुन्दिनी छाँयामा तँ अग्लो कि म अग्लो भनेर । एकैछिनमा सूर्य डुब्छ अनि थान्किन्छन दुवैजना । जयश्वर आइपुग्छन् कामबाट, फुलमाया बेलुकाको खानाको तयारी गर्दै छिन् । तीन जना लोग्ने मान्छे आउँछन् साँझमा, दुइजना अलिक बुढा अनि एकजना सत्ताइस आट्ठाइस जस्ता देखिने । उनीहरू त कुन्दिनीको हात माग्न आएका रहेछन् । अनेक लान्छना लगाउँछन् जयश्वोरलाई अनि उनी छोरी दिन तयार हुन्छन् । गोठमा बस्दाको पीडा मनमा ताजै हुँदाहुँदै फेरि उस्ले घर छोड्नु पर्ने भएको छ सदाको लागि जस्तै गरी । आफूभन्दा दोब्बर उमेरकासँग जानुपर्ने भएकाले कत्ति खुसी छैने कुन्दिनी । मनमनै भगवानलाई सोध्छे मेरो जीवनको निर्णय गर्न मलाई एक वचन पनि नसोधी किन मेरा निष्ठुर पिताश्रीलाई दिँदै छौ ? अघि लाग्छे कुन्दिनी त्यही बेलुकी रुँदै, आमा पनि गहभरी आँसु लिन्छिन् तर जयश्वोरका आँखासम्म रसाउँदैन् ।
यौवनवस्थाको यौवनता नबुझ्दै गर्भवती हुन्छे कुन्दिनी अनि पहिलो सन्तानको जन्म दिन्छे । कलिलो उमेर पन्ध्र वर्षमै छोरी की आमा भएकी छे ऊ । छोरिलाई गोठमा नै जन्माइ अनि गोठमा नै बस्दै छे । सासू, ससुरा अनि लोग्ने कत्ति खुसी छैनन् छोरी जन्माएकोमा । उसलाई फेरि पनि रजस्वला हुदा भोगेको कष्टको झल्को आइरहेको छ मस्तिष्कमा । फरक यत्ति हो रजस्वलामा एक्लै गोठमा बिताएकी ऊसँग अहिले छोरी छे अनि गोठ पनि घर नजिकै छ । सासू खाना लिएर जान्छिन् मकैको ढिडो अनि गुन्द्रुकको झोल । आमा मायाले अलक्क दिन्थिन् सासूले रिसले झर्किदै अलक्क दिन्छिन् । मेरी आमाले झन पाँच छोरीको जन्ममा कति पीडा भोगेकी होलिन्, सहेकी होलिन् सम्झँदै आफ्नो मनलाई सम्हाल्छे कुन्दिनी । फेरि पनि त्यो दिन आएको छ सुनपानी छर्केर भित्र हुल्ने । काखमा छोरी मनमा पीडाको भारी बोक्दै पस्छे मुल ढोकाबाट कुन्दिनी रजस्वलापश्चात् फर्केझैँ ।
पतिको शारीरिक यातना अनि सासूको क्रूर मानसिक यातनाबाट शोषित भएकी छे कुन्दिनी । ससुरा मौन छन्, मौनता भित्रको कठोरता उम्लने पो हो कि सोच्छे कुन्दिनी । फेरि गर्भवती भएकी छे दोस्रो पटक, भगवानसँग मङगलकामना गरेकी छे यसपाली पुत्र लाभ होस भनेर । भगवानले पुकार सुनेनन् क्यारे यसपाली फेरि पनि छोरी नै जन्माएकी छे कुन्दिनीले । तेस्रो, चौथो र पाँचौ गर्भधारणबाट पनि छोरी नै जन्माई उसले । अब फेरि छैटौं सन्तान जन्माउनको लागि उसको कोख तयार भएको छ । भगवानसँग बिन्ती बिसाएकी छे फेरि पनि कुन्दिनी । मनमनै सोच्दै छे मेरी आमाले पनि छैटौं पटकमा मेरो भाइलाई जन्म दिएकी थिइन् । यसपाली पनि भगवान प्रतिको त्याग तपस्या हलुवामा बालुवा भएको छ छोरी नै जन्माइ उसले ।
तेइस वर्षमा छ सन्तानकी आमा बनेकी कुन्दिनी जिन्दगीदेखि नै थाकिसकेकी छे । आफ्नै मनलाई धम्काउदै भन्छे सक्दिन अब यातना सहेर बाँच्न । स्वास्नी मान्छे भएर पनि किन अबुझ छिन् सासू, नाति नै खेलाउनु पर्ने उनलाई ? आफैसँग प्रश्न गर्छे अनि नाजवाफ हुन्छे । यो संसारमा लोग्ने मान्छे मात्रै निष्ठुर हुन्छन् यस मामिलामा सोचेकी उसले अब स्वास्नी मान्छेहरू झन बुझेर बुझ पचाउने रैछन् भन्ने बुझेकी छे आफ्नी सासूको अनैतिक क्रियाकलापबाट । मेरी आमा पनि भोलिकी निष्ठुर सासू बन्छिन् होला सोच्दै छे कुन्दिनी । म त अरुभन्दा फरक सासू बन्नेछु ता कि बुहारीको मनोविज्ञानिक बुझ्न सकुँ, मौनता भङ्ग गर्दै फेरि भन्छे मेरो भाग्यमा सासू बन्न नै काँहा लेखेको छ र !
मनोबल साह्रै कमजोर बनाएकी छे कुन्दिनीले यतिसम्म कि अब पुत्र लाभ नभए आत्महत्या गर्नेसम्म । पटक पटक भगवानले पुकार नसुने पनि आस्था अँझै हराएको छैन उसको । भगवानलाई भन्छे अब मलाई आत्महत्या गर्नबाट बचाउ । म मरे भने मेरा बालिकाहरू टुहुरा हुने छन् । रजस्वलामा खाना पुर्याउने आमा नभएर भोक भोकै मर्ने छन् । फेरि पनि छोरी नै जान्माएँ भने म बाँच्नुको कुनै अर्थ हुने छैन, मलाई जिउँदै मार्ने छन् यिनिहरूले ।
भगवानले बचाउन नै खोजेका रहेछन् उसलाई । मनबाट आत्महत्याको सोचलाई बहिर निकालेकी छे । ऊ नमर्ने भई अब, मनमा थोरै खुसी पलाएको छ उसको । यस अर्थमा कि पटकौको सहवासबाट पनि अर्को सन्तान हुने आश रहेन, कुन्दिनी बाँझी भएकी छे । तेइस वर्षमा नै बाँझी हुँदा खुसी हुने संसारका महिलामध्ये एक होली कुन्दिनी किनकि अब गोठ जानु अनि अछुत हुन पर्दैनै उसलाई पटक पटक ।
(नोट: यस कथाका पात्र तथा घटना काल्पनिक हुन । यदि कसैको वास्तविक जीवनमा मेल खान गएमा केवल संयोग मात्र हुनेछ । )
सारै मार्मिक र यथार्थ परक कथा
gorkhe — Mon, 12/05/2016 - 02:21
सारै मार्मिक र यथार्थ परक कथा रहेछ । लछ्मनजी कथा मन पर्यो ।
पहिले भन्दा ता अलिक शुद्ध भएछ
खै गरिमा हराइन् । पाउलिन
केही शुद्ध भयो कि सर ?
मन ता मलाइ पनि परेकै हाे । तर
Man paryo.....Good thought
न काफिमा मिलान भाे न रुक्नमा
दमदार गजल वाह
डुबेको मधेशका गढेका दर्दहरू
सगरमाथा छोएको क्षण
आज मन उडेर भाग्छ
भरतराज पन्त सम्झना र श्रद्धाञ्जली
यसै गरी बिताईदिन्छु
प्रिय मेरी मायालु तिम्रो यादमा
मीरा (प्रेम कथा)
म हुरीमा दियो जलेको देख्छु
ए झरी नझरी देउ यसरी
धोका दियौ तिमीले
किन तिम्रो माया लाग्छ
उडायो सपना सबै हुरीले
कम्प्यूटरक दुनिया (मैथिली कविता)
हजार चोटी मर्छ मान्छे
सात मुक्तक (अहो! यो संसार अचम्मको छ)
दुर्सारी थान्बा दुइरी (गजल)
बुबा (गीति कविता)
चुनावी प्रचार (मुक्तक)
चिट्ठी - आमालाई
ओडार छोड्ने दिन
कैले लहर यो मनमा चल्छ
मेरो सासमा तिम्रो मिलन
समाजसुधारक राधाबल्लभ उपाध्याय
किन दुखी बाबु भनी, कस्ले मलाई सोध्ला ?
सिंगापुरको रङ्गीन सम्झना
बरु मैले चुपचाप सहिदिए
म तिम्रा अघी पर्न लायक् कहाँ छू
ताकेर निशाना लाए
मझेरीमा उनैलाई कुरिरा'छु